Senior Accountant | Power Light Co.,Ltd ﻿
12.5.2021, Full time , Electronics / Electrical Equipment
•	2years contract with company
•	တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရပြီးအသက်(၂၃ နှစ်မှ ၃၀)နှစ်အတွင်း။
•	i Office အခြေခံရှိ၍ Computer Excel အထူးကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	LCCI Level (3) UK Certificate , ACCA Certificate ရှိရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။ -Chief Accountant အတွက်ကူညီရေးဆွဲပေးသောအတွေ့အကြုံရှိကဦးစားပေးမည်။
•	Must signabond for2years.
Work location အမှတ်(7)၊ သီရိရတနာလမ်းနှင့်ဝေဇယန္တာလမ်းထောင့်၊ ဝေဇယန္တာလမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊
Job posted: 12/5/2021
•	Good communication & interpersonal skills. •	2years contract with company
•	Strategic Purchase: item analysis, planning, sorting, Total cost consideration ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ •	2years contract with company
•	Project များအတွက်Electrical Drawing / plan ပေါ်အခြေခံ၍မီးပစ္စည်းများရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ Light Point calculation,Power Point, load calculation, single line diagram များကိုယ်တိုင်စ/ဆုံးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	2years contract with company
•	Lighting Products ပစ္စည်းများအား Tender နှင့် Project များအတွက်Sales plan နှင့်Target များရေးဆွဲအကောင်ထည်ဖော်ပြီး Project Sales & Marketing Department အားကောင်းစွာ အုပ်ချုပ်၍ Target ပြည့်မှီအောင်Management လုပ်နိုင်ရမည်။ •	2years contract with company
Senior Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Power Light Co.,Ltd Accountancy Jobs Accountancy Jobs Electronics/Electrical Equipment Jobs in Myanmar, jobs in Yangon